प्रहरी नियमावली संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्माः के- के हुँदैछ नयाँ ? - jagritikhabar.com
प्रहरी नियमावली संशोधन प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्माः के- के हुँदैछ नयाँ ?
नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधन प्रक्रिया मन्त्रिपरिष्मा पुगेको छ । संशोधनमा महत्वपूर्ण प्रावधानहरु संशोधन हुँदैछन् । प्रहरी नियमावली २०७१ संशोधन गर्न लागिएको हो । संशोधनमा विभूषण वापत बढुवामा प्राप्त हुने नम्बर हटाएर ज्येष्ठतामा थप्न लागिएको हो । गृह मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालय, कानून मन्त्रालय तथा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिएर प्रहरी नियमावली संशोधनको प्रक्रिया मन्त्रिपरिषद् लगेको हो । जसमा बढुवासम्बन्धि नम्बरको अंकतालिका हेरफेरको प्रस्ताव छ ।
हालको प्रावधानअनुसार बढुवाको एक सय पूर्णाङकमध्ये विभूषणवापत २ नम्बर जोडिन्छ । बढुवामा पर्नकै लागि हरेक वर्ष विभूषणका लागि सुरक्षा निकायबाट तिव्र दबाब आउने गरेको र यही नम्बरको चलखेलले बढुवा समेत निष्पक्ष हुन नसकेको निष्कर्षसहित यस्तो नम्बर हटाउन लागिएको गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । यही वर्ष एक सय २६ जना प्रहरीले विूभषण पाएकोमा आधाजसोले प्रहरी महानिरीक्षकलाई थाहा नै नदिई राजनीतिक सोर्साफोर्सका आधारमा विभूषण लिएका थिए । जसले प्रहरीको चेन अफ कमाण्डमा समेत समस्या ल्याएको थियो । पहुँच हुनेले विभूषण पनि पाउने र छिटो बढुवा हुने र पहुँच नहुनेहरुले विभूषण पनि नपाउने र बढुवामा पनि पछि पर्ने अवस्था आएपछि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको हो ।
प्रहरी बढुवामा एक सय पूर्णांकमा मूल्यांकन हुन्छ । जसमा सबैभन्दा धेरै नम्बर ल्याउनेहरू बढुवामा सिफारिस हुन्छज् । एक सयमध्ये ४० नम्बर कार्यसम्पादन मूल्यांकन र २० ज्येष्ठताका आधारमा तय हुन्छ । नियमावली संशोधनपछि ज्येष्ठताबापत २२ नम्बर हुनेछ । जसअनुसार अब ज्येष्ठ प्रहरी अधिकृतहरु बढुवामा पर्ने सम्भवना धेरै हुन्छ ।
त्यस्तै, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभवका आधारमा आठ, शैक्षिक योग्यताबापत १०, तालिमबापत ७.५, चुनौतीपूर्ण तथा विशेष जिम्मेवारीबापत पाँच र बढुवा समितिले दिने ७.५ अंक हुन्छ । जसलाई यथावन् राखिएको छ । विभूषणको नम्बर ज्येष्ठतामा जोडेपछि यसले बढुवालाई पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउन सहयोग पुग्ने निष्कर्षसहित हटाउन लागिएको एक उच्च प्रहरी अधिकारीले बताए ।
हरेक वर्ष विभूषण पाउनेको सूचीमा ठूलो संख्या सुरक्षाकर्मीको हुने गरेको छ । निश्चित कोटा नभएकाले यसरी जथाभावी विभूषण वितरण हुँुदा विभूषण नै विवादमा पर्दै आएको छ ।
प्रहरीमा विभूषणवापतको नम्बर हटाउनुपर्ने माग केही वर्षयता उठ्दै आएको थियो । चार महिनाअघि प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसससम्बन्धि प्रस्ताव गृहमा पठाएको थियो । दुई साताअघि अर्थ मन्त्रालयले नियमावली संशोधनको मस्यौदामा सहमति दिएपछि गृहले कानून र लोक सेवा आयोगको समेत सहमति लिएर मन्त्रिपरिषद् लगेको हो । नियमावली छिट्टै संशोधन हुने गृहका एक अधिकारीको भनाई छ ।
सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि यस्तै समस्या छ । सशस्त्रको पनि नियमावली संशोधन गरी विभूषणवापतको नम्बर बढुवाबाट हटाइने गृह मन्त्रालयको तयारी छ ।
नियमावली संशोधनमा प्रहरीमा तीन नयाँ पद थप्ने प्रस्ताव समेत छ । वरिष्ठ नायव निरीक्षक, सहायक हवल्दार र वरिष्ठ हवल्दारको पद पनि थप्न लागिएको हो । साथै, कार्यालय सहयोगीको पाँच तह बनाउन लागिएको छ । हाल कार्यालय सहयोगी भर्ना भएकै पद र तहबाट अवकाश पाउने गरेका छन् । अब अवकाश पाउने कार्यालय सहयोगीले असइ बराबरको सुविधा पाउनेछन् ।
प्रहरीको तल्लो तहका देखिएको बढुवा जामको समस्या समाधान गर्न नयाँ पद थप्न लागिएको हो । हाल सइबाट इन्सपेक्टरमा तथा जवानबाट हवल्दारमा बढुवा हुन करिब १५ वर्ष लाग्ने अवस्था छ । लामो समय एउटै पदमा काम गर्नुपर्दा नैराश्यता उपन्न हुने भएको भन्दै नयाँ पद थप्न लागिएको हो ।